Warshada Baakadaha |Wax-soo-saareyaasha Qalabka Wax-Baakadaha ee Shiinaha, Soo-saareyaasha
Bac iyo Rolls
Filim heerkulbeeg ah
mashiinka maqaarka vacuum
Duubista Vacuum sealer ee madow
Iyada oo ah mid ka mid ah hormuudka wax soo saarka ee bacaha vacuum sealer iyo qiimaha duubka, Boya sare ayaa ku siin kara duubabka vacuum sealer-ka madow ee gaarka ah oo leh qiime aad u tartan badan oo MOQ ah!
Duubabkani dhinac baa cad, dhinaca kalena waa madow .Waa naqshad aad ula kac ah.Dhinaca cad ayaa dadka u ogolaanaya inay eegaan waxay shaabadeeyeen.Ku raaxayso quruxda hilibkooda iyo khudaarta, sidoo kale waxay tusi karaan asxaabtooda.Iyo dhinaca madow waxay sameeyaan bacahani waxay ka ilaalin karaan hoos u dhaca iftiinka.Kaas oo waliba kaa caawin kara sirta .
Dhammaan bacahayada vacuum sealer-ka waxay la shaqeeyaan dhammaan alaab-qeybiyeyaasha vacuum-ka: Kaydka cuntada, Weston, Cabela's, Seal-a-Meal, Ziploc & in ka badan…
Boya waa hormuudka wax soo saarka ee bacaha vacuum sealer iyo duub oo leh taariikh 20 sano ah, qiimo jaban, tayo sare leh, heer cunto, waxaas oo dhan waxaad ku heli kartaa Boya!
Boorsada vacuum sealer sidoo kale loogu magac daray bac vacuum ah oo daboolan waa mid ka mid ah alaabtayada, oo leh hal dhinac oo ka samaysan hal dhinac oo cad, Dusha sare ee gaarka ah, oo si fudud hawada uga soo saarta bacda si cuntadaada ay u noqoto mid cusub oo ay u kordhiso nolosha shelf, oo leh faakuum textured. bacaha waxaad ku raaxaysan kartaa cunto cusub xitaa guriga.
Bacahayada vacuum sealer-ka waxay la shaqeeyaan dhammaan alaab-xireyaasha faakuum-ku-sameeyaha: Keydka cuntada, Weston, Cabela's, Seal-a-Meal, Ziploc & in ka badan…
Sida mid ka mid ah soo saarista hormuudka u ah baakadaha dabacsan ee Shiinaha ,Boya waxay bixisaa dhammaan bacaha iyo filimada leh codsiyo ballaadhan oo ballaadhan. Dhumucda lakabka waxay noqon doontaa badeecad kala duwan oo loogu talagalay codsiyada kale .Tusaale ahaan, Bacda tuubada ur aan caddayn iyo filimku waa mid ka mid ah alaabtayada iibka kulul, oo ay soo saarto tiknoolajiyada la isku qurxiyo oo leh xannibaad sare iyo midab kala duwan.
Tuubbada xannibaadda sare ee ur ka-hortagga Boorsooyinka waxay ku fiican yihiin walxaha wasakhaysan waxayna sidoo kale aad faa'iido u leeyihiin ilaalinta dhirta, tubaakada, geedo qallalan.Boorsooyinka tuubada ka hortagga urta waa kuwo waara oo adkaysi u leh.Waxaan sumcad wanaagsan ku helnay suuqa Japan .
Boya waa wax soo saarka oo la aasaasay 2018, nafteena u huray cilmi baaris cusub oo walxaha baakadaha ah, filimka maqaarka waa mid ka mid ah alaabtayada cusub kuwaas oo leh jawaab celin cajiib ah oo ku saabsan suuqa. , xataa alaabta qallafsan iyo kuwa af adag waa la baakayn karaa oo si badbaado leh ayaa loo qaadi karaa.
Boya - wax soo saarka hormuudka ah ee alaabta baakadaha dabacsan ee Shiinaha waxay bixisaa noocyo kala duwan oo alaabooyin ah oo leh codsi ballaaran PET, PVC, iyo aluminium.
Waxaad yeelan kartaa xannibaad sare, xannibaad dhexdhexaad ah ama aan lahayn xannibaad.Filimadayada daboolka ah waxaa lagu heli karaa 'diirka fudud', lakabyo daboolaya oo horumarsan iyo sifooyin ka-hortagga ceeryaamo.
Loogu talagalay qaab dhismeedka 9-lakab ee PA / EVOH/PE iyo PE/EVOH/PE kaas oo ku daraya lakabka xannibaadyada horumarsan ee filimada daboolaya kaas oo ilaalinaya nadiifnimada alaabta oo kordhisa nolosha shelf.
Boya waa mid ka mid ah soo saarista xirfadlayaasha ah ee Shiinaha, soo saarta bacaha tayada sare leh iyo filimaan loogu talagalay baakadaha cuntada kuwaas oo si toos ah ula xiriiri kara cuntada qiimo tartan leh. Waxaan sidoo kale nahay shirkad hal-abuur leh oo ay ka go'an tahay cilmi-baaris ku saabsan alaabta cusub ee baakadaha.
Sida mid ka mid ah habka ugu waxtarka badan uguna ganacsiga badan ee loo ilaaliyo cuntada Waxa kale oo aad ku dari kartaa siibadaha iyo daabacaadda ilaa 10 midab.
Haddii aad raadinayso 2.5mil, 3mil, 4mil, 5mil caqabad caadi ah ama boorsada vacuum barrier sare - had iyo jeer waxaan haysanaa waxaad u baahan tahay!
Boya waxay bixisaa labada boqorada biyaha iyo filimka filimka sida filimka hoose ee baakadaha cuntada, kaas oo ka shaqayn kara dhammaan noocyada mashiinka heerkulbeegga, oo leh nolol shelf-nolosha oo loogu talagalay baakadaha cuntada ee kala duwan.Suuqaheena wuxuu daboolayaa Aisa, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Australia, Europ,Bariga Dhexe iyo Koonfur Afrika
Iska yaree Shandada iyo Filimka
Bacaha Barrier-sare ee PVDC, qoys cusub oo bacaha lakabyo badan leh, ayaa bixiya oksijiin iyo xannibaad qoyaan oo sarreeya.Taas oo ka dhigaysa awoodda xidhitaanka bacaha xannibaadda sare heer cusub oo dhan.
Sida mid ka mid ah hormuudka soo saaraha multilayer PVDC barrier yaraynta bac gudaha Shiinaha , Boya isticmaalaya technology adduunka horumarsan si ay u soo saaraan multilayer coextruded PVDC bacaha yareeyaan.Waxaan soo saarnay qaacido u gaar ah oo bixisa xirid adag, iska caabin sare, ogsijiin iyo caqabad biyo aad u wanaagsan, iyo dhalaal iyo hufnaan heersare ah.
Boorsooyinka yareeya waxay buuxinayaan shuruudaha FDA ee agabka baakadaha cuntada.Waxay ku habboon tahay baakooyinka hilibka cusub iyo barafsan labadaba leh ama aan lahayn lafo, farmaajo, iwm. ～-40℃.
Filimka barkinta hawada
Bacda hawada sare oo sidoo kale loo yaqaan bacaha hawada la buufiyo ayaa si weyn loogu isticmaalaa gaadiidka qaar ka mid ah alaabada jilicsan.Waxay ku siin kartaa difaac qumman oo alaabtaada ah si aad u hubiso in macaamiishaadu helaan waxay iibsadaan.
Waxaa si gaar ah loogu talagalay in lagu daboolo dhammaan baahiyaha baakadaha ee suuqyada kala duwan .Bacaha tiirarka hawada ee Boya waxaad ku ballaarin kartaa ganacsigaaga u baahan buuxinta bannaanka iyo ilaalinta alaabtaada si deg deg ah oo ku haboon.
Awoodeeda rogrogmi karta waxay xidhidhaysaa farqiga u dhexeeya buuxinta faaruqa dhaqanka ah iyo codsiyada barkinta.Waxaad samayn kartaa bac tiir si aad u buuxiso daldaloolo kasta oo aad ku darto lakabka shoogga nuugaya ee duubka xumbo sanduuq kasta.Xirmooyinka tiirka hawadu waxay bixiyaan ilaalin heersare ah marka loo eego agabka dhoofinta dhaqameed sidoo kale waxaa loo kaydin karaa si ku habboon iyadoo la qaadanayo qayb ka mid ah booska lawska iyo xumbo.
Beerta Warshadaha ee Beitou, No. 10 Keji Avenue, Magaalada Yixing, Gobolka Jiangsu
Telefoon: +86 18261589258